မောင်မောင်စိုး – တိတ်ဆိတ်သော နေ့ရက်များ၊ ငြင်သာမြန်ဆန်သော တွေ့ဆုံမှုများ ကြားက မြန်မာပြည် | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်မောင်စိုး – တိတ်ဆိတ်သော နေ့ရက်များ၊ ငြင်သာမြန်ဆန်သော တွေ့ဆုံမှုများ ကြားက မြန်မာပြည်
photo – MoeMaKa၊ ၂၀၁၁၊ သန်းစိုးလှိုင်
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီ မဲစာရင်းစကြေငြာကတည်းက လူတိုင်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ရှိကြသည်။ မဲဆွယ်ကာလကျတော့ ဝုန်းဒိုင်းကျဲ သည်။ မဲပေး မည့်နေ့ကျတော့ မိုးမလင်းမှီ ထ၍ သွား တန်းစီကြသည်။ တကယ်တမ်းဆိုလျင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲသည် သာမန်ရွေးကောက်ပွဲတခုနှင့်မတူချေ။ အနှစ်နှစ်အလလ ခါးစီးခံခဲ့ကြရ သော လူထု၏ရင်ထဲမှ ဆန္ဒကို ဖွင့်ဟထုတ်ပြသော ဆန္ဒပြပွဲတခု လည်းဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လူထုက အာရုံစိုက်ကြသည်။ ရလဒ် ထွက်လာတော့ အားလုံးပျော်ကြသည် ။ သို့သော် စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ်မပျော်နိုင်ကြသေးပေ။ အခြေအနေကို လူထုက ကောင်းစွာသဘောပေါက်ကြသကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း ထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်းရှိကြဖို့ ဆိုသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မှီ ဝုန်းဒိုင်းကျဲနေသလောက် ရွေးကောက်ပွဲ အလွန်ကာလသည် တိတ်ဆိတ်သော နေ့ရက်များဖြစ်သွားသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံအရ၎င်း လက်ရှိရွေး ကောက်ပွဲသည် မြန်မာစစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲ ထားသည့် စည်းမျည်းစည်းကမ်းအောက်မှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရသည့် power game တခုဖြစ်နေသည်က၎င်း လက်ရှိ အချိန်တွင် နိုင်ငံ၏ အလုံးစုံ အာဏာပိုင်မှုသည် မြန်မာစစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များ လက်ထဲတွင်ရှိနေသေး၍ ၎င်း နောက်အစိုးရသစ်လက်ထဲ အာဏာလွှဲမည် ဆိုတောင် အချိန် ကာလ လေးလခွဲကျော် ငါးလခန့် ကျန်သည်ကြောင့်၎င်း အမှားမခံအခြေအနေကို အားလုံးသဘော ပေါက်နားလည်စွာ တိတ်ဆိတ်သော နေ့ရက်များဖြစ်သွားသည်ဟု ဆိုရပေမည်။
ထိုပြင် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်သည်လည်း အကဲခတ်များ တွက်ချက်ထားသကဲ့သို့ဖြစ်လာမခဲ့ပေ။ NLD ၆၀% ကြ့ခိုင်ရေး ၃၀% တိုင်းရင်းသား ၁၀% ဟုဖြစ်လာပါက အခြေအနေသည် တမျိုးတဖုံဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် NLD က ၈၀% နှင့် အပြတ်အ သတ် လွှတ်တော်ကိုချုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အစိုးရဖွဲ့နိုင် သွားသောအခါ ကြံ့ခိုင်ရေးလည်းတိတ်ဆိတ်သွားသည်။ အာဏာလက်ရှိမှ အာဏာလက်မဲ့ဖြစ် တော့မည် မဟုတ်ပါလော။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့အ တွက်လည်း အရှုိက်ကို အထိုးခံလိုက်ရသကဲ့သို့ တိတ်ဆိတ်သွား တော့သည်။
ဤသို့တိတ်ဆိတ်သောကာလတွင် ငြင်သာသော လှုပ်ရှားမှု များစွာဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဦးစွာအားဖြင့် ဒေါ်စုက အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ဦးတည်ချက် အစိုးရသစ်သို့ ချောမွေ့စွာ အာဏာ လွှဲပြောင်းနိုင်ရေး ဦးတည်ချက်ဖြင့် သမတ ကာချုပ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယကတို့အား တဦး ချင်းတွေ့ဆုံရန်ကမ်းလှမ်း လိုက်သည်။ ဦးရွှေမန်းက ချက်ခြင်းတွေ့မည်ဟု တုန့်ပြန်သည်။ သမတနှင့် ကာချုပ်က သတိကြီးစွာထား၍ တုန့်ပြန်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမှ တွေ့ဆုံမည်ဟုဆိုသည်။ အများက ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းတွင်းတွေ့ဆုံမည်ဟု ယူဆခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင်အများထင်သည်ထက်စော၍ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဦးရွှေမန်းနှင့် ၆ ကြိမ်ထက်မနဲတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သမတ ကာချုပ်တို့နှင့် တကြိမ်စီတွေ့ဆုံခဲ့သည်။အစိုးရသစ်သို့ အာဏာလွှဲပြောင်းရေး ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေရမည်ဆိုသည့် ကတိကဝတ်များ ကြားသိရ သည်။ ကြားဖြတ်အနေနှင့် အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေမြေးအား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သကဲ့သို့ ဦးသန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထူးခြား သည့်တွေ့ဆုံမှုဟု အများက သုံးသပ်ကြသည်။ ဦးသန်းရွှေ အနေနှင့် လက်ရှိအစိုးရနှင့် စစ်တပ်အား ထိမ်းချုပ် ထားနိုင်ဆဲ ဆိုသည်မှာ အငြင်းပွါးဘွယ် ကိစ္စဖြစ်နေသော်လည်း သူသည် တစုံတရာ သြဇာရှိဆဲဆိုသည်ကိုတော့ အငြင်းပွါးဖွယ်ရာမရှိပေ။
အလားတူပြည်တွင်းတွေ့ဆုံမှုများအပြင် ဒေါ်စုသည် နိုင်ငံတကာ သံတမန်များစွာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ လက်ရှိလွှတ်တော်အဆင့် နေရာအား အသုံးပြု၍ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၌ မြန်မာ နိုင်ငံရှိ သံတမန်အားလုံးဖိတ်ကြားတွေ့ဆုံခဲ့သည်။အားလုံးမပျက်မကွက် တက်ရောက်ကြသည်။ ထူးခြားချက်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်နှင့် ၂ ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တရုတ် ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော တရုတ်အစိုးရ အထူးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဂျပန်အစိုးရကလည်း ဒေါ်စုအား အစိုးရဖွဲ့ပြီးပါက ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဦးစွာလာရန် ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ လောလောဆယ်တွင်ပင် NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ဖိတ်ကြား၍ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဂျပန်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အကူအညီများ မြန်မာပြည်သို့ အမြောက်အများ စီးဝင်ရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်းဆိုခဲ့သည်။
အမေရိကန်ကလည်း အပြောင်းအလဲကာလတွင် မြန်မာရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးရာ ဝန်ကြီးအား မြန်မာသံအ မတ်သစ်အဖြစ်ခန့်အပ်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ သမတအိုဘားမားလည်း မြန်မာပြည်သို့ တတိယ အကြိမ် လာရောက်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်ဟုဆိုသည်။ ချုပ်၍ ဆိုရလျင် အင်အားကြီးနိုင်ငံများထဲမှရုရှားမှအပ ကျန်နိုင်ငံကြီးအားလုံးအပါ နိုင်ငံအများစုသည် ဒေါ်စုနှင့် NLD အစိုးရသစ်အပေါ်သူတို့၏ တိမ်းညွှတ်မှုကို သိသိသာသာပြခဲ့သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ တရုတ် အမေရိကန် ဂျပန်တို့၏ သေနင်္ဂဗျူဟာထဲတွင်ရှိသော မြန်မာအား ရုရှားတို့ ဝင်တိုးရန်လည်း မဖြစ်နိုင်ပေ။
သို့ဖြစ်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ အလွန်နေ့ရက်များသည် တိတ်ဆိတ် နေသော်လည်း ငြင်သာသော လှုပ်ရှားမှုများသည် အတော်လေး စိတ်သည်ဟုဆိုရပေမည်။ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတလအတွင်း အတော်ခရီးပေါက်သည်ဟု ဆိုရမည်။
သို့သော် ထိုထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အများ ပြည်သူကသိချင်နေကြသော်လည်း အသေးစိတ် အချက်အလက်များ မသိရ၍ အားမလိုအားမရဖြစ်နေကြသည်။ သတင်းသမား များက လည်း သတင်းဦးသတင်းထူးမရ၍ အလိုမကျဖြစ်နေပုံရ သည်။ ထိုအခါ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိဟူ၍အချို့ကဆိုလာသည်။ သို့သော် မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ၏ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုများအား အချိန်မတန်မှီသတင်း ထုတ်ပြန်လေ့ မရှိပေ။ လျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ်သာ ထားလေ့ရှိသည်ကို သတိပြုရန် လိုသည်။ ဤသို့ထားရှိသည်မှာ အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ များသာမက ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံများမှ ကွန်မြူနစ်ရင့်မကြီးများ ဖြစ်ကြသော စတာလင်တို့ မော်စီတုန်းတို့လည်း ဤနည်းနှင်နှင် သာဖြစ်သည်။ ပွင့်လင့်မြင်သာမှုနှင့် နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်များ၏ ထိပ်တန်း လျှို့ဝှက်ချက်များကို ခွဲခြားကြည့်မြင်ရန် လိုပေသည်။ ယခုကဲ့သို့ အလွန်အကဲဆတ်သောမြန်မာ့နိုင်ငံ အပြောင်းအလဲ ကာလတွင် ပို၍အရေးကြီးသည်ကို သဘောပေါက်ရန် လိုပေလိမ့်မည်။တချိန်တွင် သမိုင်းအဖြစ်ပေါ်လာပေလိမ့်မည်။
တချိန်တည်းတွင်သူမသည် သူမဖခင် လွတ်လပ်ရေးယူစဉ်က အတုအယောင် လွတ်လပ်ရေး ရွှေရည်စိမ်လွတ်လပ်ရေးဟု အပြောအဆို ခံခဲ့ရသကဲ့သို့ သူမ ရယူရန်ကြိုးစားနေသည်မှာ ဒီမိုကရေစီအတုအယောင် သာဖြစ်သည်ဟူသော တိုက်ခိုက်မှုများကိုလည်း ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းနေရသည်။ သို့သော် သူမသည်လည်း သူမဖခင်ကဲ့သို့ပင် လူအများစု၏ ထောက်ခံမှုရရှိထားခဲ့သည်။
ငြင်သာသော တွေ့ဆုံမှုများ၌ လူပြောများသောတွေ့ဆုံမှုမှာ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံမှုဟုဆိုရမည်။ ပြီးခဲ့သော ၅ နှစ်အတွင်း ငြိမ်သက်နေသော ဦးသန်းရွှေသတင်း ထွက်လာ သည်မှာ အများကိုလှုပ်ခတ်စေသည်။ သို့သော် ဦးသန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းအကျဉ်း ဖေါ်ပြမှု အရဆိုလျင် ဒေါ်စု၏ အောင်မြင်မှုအားအသိမှတ်ပြုသည် ဆိုသည်သာပါဝင်ပါသည်
အဘယ်ကြောင့်တွေ့ဆုံသနည်းဟု သုံးသပ်ရာတွင် အမြင် အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ ထိုအထဲမှ အဓိကအချက်ကို သုံးသပ်ရလျင် ဒေါ်စုနှင့် အစိုးရသစ်အား အာဏာလွှဲပြောင်းရေးအား သူထောက်ခံသည် လူသိရှင်ကြားကြေငြာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြောဆို လိုက်ခြင်းသည် အာဏာလွှဲပြောင်းရေးကို ချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင် မည်ဟု ကြေငြာထားသော သမတနှင့် ကာချုပ်အား သူ၏ထောက်ခံမှု အားပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်ရာ အာဏာမလွှဲပြောင်းလိုသူများ ရှိနေ၍လောဟု စဉ်းစားဖွယ်ဖြစ်သည်။
အစိုးရသစ်သို အာဏာလွှဲပြောင်းရန် သမတ ကာချုပ်နှင့် အတူ လိုလိုလားလား ရှိသူများ ရှိသကဲ့သို့ပင် တွေဝေနေသူများလည်း ရှိနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ကြာမြင့်စွာ အာဏာဆုပ်ကိုင်လာသော စစ်တပ်အနေနှင့် လက်ရှိ အာဏာဆုပ်ကိုင်ထားရာမှ လက်မလွှတ်လိုသူအချို့ရှိနေ ပါက အံ့သြဘွယ်မရှိပေ။ မိမိနှင့် မိမိအုပ်စု၏ အကျိုးစီးပွါးကို ကာကွယ်လိုသူတချို့ရှိနေနိုင်သည်မှာ မထူးဆန်းပေ။ ထိုသူများ မည်မျှ အင်အားရှိနိုင်သည်သာ အရေးပါသည်။ ကြာမြင့်စွာ ငြိမ်သက်နေသော ဦးသန်းရွှေ အသံထွက်လာခြင်းမှာ ထိုအကြောင်းက အဓိကဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ယူဆရပေသည်။ လက်ရှိမှ လက်မဲ့မဖြစ်ချင်သူများ၏ ရုန်းကန်နိုင်မှုကိုလည်း ထည့်မတွက်၍ မဖြစ်ပေ။
ထို့ပြင် ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီသို့ကူးပြောင်းခဲ့ ရသည့် စစ်ဖက်အရာရှိကြီး တရာ ကျော် ရှိည်။ ပုံမှန် အရပ်ဖက်ရာထူးဆက်လက်ယူလေ့ရှိရာမှယခု ရွေးကောက်ပွဲတွင် အများစု ရှုံးနိမ့်သွားပေရာသူတို့ထဲမှ အချို့လည်း နေသားမကျ ဖြစ်နေဖွယ်ရှိ သည်။ သူတို့၏ မှန်တမ်း ရပိုင်ခွင့်ယူဆထားသည်များ ပျက်ပျယ်သွားပြီ မဟုတ်ပါလား။ သို့ဖြစ်ရာအစိုးရအကူးအပြောင်းကို အသာတကြည် လက်ခံမည့်သူများရှိမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ လက်မခံ လိုသည်များ ရှိပါက အံ့သြဘွယ်မရှိပေ။ ထို့ပြင်၎င်း အချင်းအရာမှာ ယခင်အစဉ်အလာရပိုင်ခွင့်များ ပျက်ပျယ်ပြီး နောင်စစ်တပ် အရာရှိကြီးများ ပင်စင်ယူပြီးနောက်သွားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သွားရာ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများအပေါ်မှာပါ သက်ရောက်မှုရှိသည်ဟု ဆိုရမည်။ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် ကာချုပ် က ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မှီ တပ်မှထွက်၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ များကို ခေါ်တွေ့သည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
နောက် အင်အားစုတခုမှ နအဖ/ နဝတ ကာလက အရေးယူခံရ ဖမ်းဆီးခံရ၍ လုပ်ပ်ိုင်ခွင့် အာဏာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာပါ ဆုံးရှုံးသွားသော အပြုတ်တသိုက်ဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် သေမထူး နေမထူးများက ရှေ့ထွက်များ ဖြစ်ပုံရသည်။ ယခုအချိန်တွင် ထိုအင်အားစုများသည် တလှေထဲစီးများဖြစ်သွားပုံရသည်။ သူတို့အဖို့ ဒီမို့ကရေစီ အင်အားစုများ ပြည်သူများကလည်း လက်မခံ သဖြင့် သူတို့အတွက် အားကိုးရာသည်စစ်တပ်သာ ဖြစ်နေပေတော့သည်။သို့ဖြစ်ရာ ယခု ဦးသန်းရွှေ နှင့် ဒေါ်စု တွေ့ဆုံပွဲတွင် နှစ်ဖက်စလုံးအား ဆန်ကျင်တိုက်ခိုက်သည့် အသံထွက်လာတော့သည်။
တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်သတင်းတွင် မပါသည့် အာဏာရှင် ဟောင်းဦးသန်းရွှေ မိသားစုအနေနဲ့ တပ်ကိုအသုံးချထားသည်ဟူ ၍ ဆိုလာသည်။ တဖက်မှလည်း ဒေါ်စုအနေနှင့်လည်း ဦးသန်းရွှေ အားတွေ့စရာ အကြောင်းမရှိဆိုကာ တိုက်ခိုက်လာတော့သည်။ လက်ရှိမြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် များ သီတင်းကျွတ်တိုင်း သွားကန်တော့နေသူအား ဒေါ်စုတွေ့သည်ကို ရေကြီးခွင့်ကျယ် လုပ်နေသည်မှာ ပြသနာမရှိ ပြသနာရှာကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အစတခု အတင်းဆွဲထုတ်၍ဂယက်ကြီးတခုထအောင် လုပ်နေသည်နှင့်တူသည်။
ထိုပြင် လက်ရှိအခင်းအကျင်းတွင် ဦးရွှေမန်းနေရာရလာလေရာ ဦးရွှေမန်းအား သစ္စာဖေါက်အဖြစ် ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူများ၏ လက်ရာလည်း ပါဝင်လာနိုင်ဖွယ်ရာရှိပေသည်။ သို့ဖြစ်ရာ မည်မျှအတိုင်းအတာထိ သက်ရောက်၍ မည်သည့်အကျိုးဆက် သက်ရောက်နိုင်သည်ကိုတော့ ဂရုပြုသင့်ပေသည်။ ထိုသူများသည် စစ်တပ်ကို မိမိတို့၏စစ်တပ် မျိုးဆက်သစ်တို့၏ စစ်တပ်ဟု ဆိုကာ စစ်တပ်နှင့် လူထုအား သွေးခွဲခြင်း အာဏာလွှဲပြောင်းရေးအား နှောင့်ယှက်လာနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
သို့သော် ကာချုပ်ကတော့ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့၊ ကျိုင်းတုံတပ်နယ်၌ ပြောကြားရာ၌ ဘယ်အစိုးရတက်တက် တပ်မတော်၏တာဝန် သည် ကာကွယ်ရေးတာဝန်ဟုဆိုခဲ့သည်။
အကူးပြောင်းကာလ၏လေးလခန့်အကျန်တွင် နောက်တိတ်ဆိတ် မှုတခုမှုမှ ပြည်တွင်းပြည်ပ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ တိတ်ဆိတ်မှု ဖြစ်သည်။ထိုသူတို့သည် အပြောင်းလဲတခုခုကို မသေချာမခြင်း အသံတိတ်၍ နှုတ်ဆိတ်နေကြသည်။ ထို့ပြင် သူတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုကြ။ နောင် ကာလအတွက် နေရာဦးရုံဦး၍ ငွေထုပ်ပိုက်ကာ စောင့်ကြည့် နေကြသည်။ သို့ဖြစ်ရာ နောင်အစိုးရမတက်မှီ လေးလအတွင်း မြန်မာ့စီးပွါးရေး ထိုင်းမှိုင်းမှုသည် ရှောင်လွှဲဖို့ ခက်ခဲပေသည်။ အကျိုးဆက်တော့သိပ်ကြီးဖွယ်ရာမရှိဟု ယူဆရပေသည်။
စီပွါးရေးသမားများ၏ တိတ်ဆိတ်မှုမှာ သူတို အကျိုးစီးပွါး ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူထု၏ တိတ်ဆိတ်မှုမှာ မျှော်လင့်ချက်နှင့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအာဏာရပါတီ၏ တိတ်ဆိတ်မှုမှာ အကောင်းရော အဆိုးပါရောနေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တလအတွင်း ငြင်သာသော တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုများ ပို၍ ပို၍ စိပ်လာ မြန်ဆန်လာသကဲ့သို့ ရုန်းကန်မှုတချို့လည်း တွေ့နေရသည်ဟုဆိုရမည်။ သို့ဖြစ်ရာ ထူးခြားသော ဖြစ်စဉ်ကို လျင်မြန်စွာ မြင်တွေ့ရတော့မည်ဟု သုံးသပ်ရပေသည်။
One Response to မောင်မောင်စိုး – တိတ်ဆိတ်သော နေ့ရက်များ၊ ငြင်သာမြန်ဆန်သော တွေ့ဆုံမှုများ ကြားက မြန်မာပြည်
Dr. Zhivaka(Kambawza) on December 10, 2015 at 9:31 pm
There is nothing constant in the Universe, ALL ebb and flow. Usually quiet and still climatic conditions lead toaformation of STORM. Storm for CHANGE or Turmoil?.
Those people who are so called Buddhists themselves can not cope up with failures and are still thinking to do Evils.They should remember the Buddha’s Teachings” Anicca, Dukkha and Anatta if they are true Buddhists. They have to reap what they sow.